Mushandisi interface dhizaini: zvidzidzo kubva kuIndianapolis erevheta | MarTech Blog
Ndichiri kuuya nekudzoka kumusangano rimwe zuva, ndakakwira muelevheta yaive neiyi mushandisi interface dhizaini:
Ndiri kufungidzira nhoroondo yeiyiti inoenda chimwe chakadai.
Elevator yakagadzirwa uye yakaunzwa neakajeka, ari nyore kushandisa mushandisi interface seiyi:
Chimwe chinhu chitsva chakabuda: "Tinofanira kutsigira braille!"
Panzvimbo pekugadzirisa patsva mushandisi mushe mushe, zvimwe dhizaini yaingove yakakwenenzverwa mune yekutanga dhizaini.
Chinodiwa chakasangana. Dambudziko rakagadziriswa. Kana kuti?
Ndakave nerombo rakanaka rekuona vamwe vanhu vaviri vachitsika paelevheti uye vachiedza kusarudza pasi yavo. Mumwe akasundira “bhatani” re “braille” (pamwe nekuti raive rakakura uye riine musiyano neremberi - handizive) asati aona kuti raive risiri bhatani zvachose. A bit flustered (I was staring), iye yakadzvanya bhatani chairo pane yake yechipiri kuyedza. Mumwe munhu akakwira pane imwe pasi akamisa chigunwe chake pakati-pekutengesa kuti aongorore sarudzo dzake. Akafungidzira nenzira kwayo, asi kwete pasina kufunga kwakaperera.
Ndinoshuva dai ndaigona kuona munhu ane hurema hwekuona achiedza kushandisa erevheta iyi. Mushure mezvose, ichi chimiro chebraille chakawedzerwa kunyanya kwavari. Asi braille pabhatani risina kana bhatani ingabvumidza sei munhu ane maziso ekuona kusarudza pasi yavo? Izvo hazvisi zvisingabatsiri chete; ndizvozvo. Iyi yekushandisa interface yekugadzirisa patsva haina kungotadza chete kugadzirisa izvo zvido zveavo vane kutadza kuona, asi zvakare yakaita kuti mushandisi ruzivo ruvhiringidze kune vanoona vashandisi.
Ndinoona kuti kune ese marudzi emitengo uye zvipingaidzo zvekugadzirisa chimiro chemuviri senge mabhatani eelevheta. Nekudaro, isu hatina izvozvi zvipingaidzo nemawebhusaiti edu, webhu webhu, uye nhare mbozha. Saka usati wawedzera icho chitsva chakanakisa chimiro, ita shuwa kuti urikushandisa nenzira inosangana chaiko nechido chitsva uye isinga gadzi dambudziko nyowani. Semazuva ese, mushandisi anoiedza kuti ave nechokwadi!
Big Brother is Shamwari Yako on Facebook
Pakupedzisira, Kufuridzirwa neKiyi kiyi
May 10, 2011 pa 11: 06 AM
Chinyorwa chikuru John. Yakananga kumberi, inosetsa uye kune iyo poindi.
May 11, 2011 pa 2: 01 PM
hongu izvo zvinotyisa mamepu bhatani… zvinondiyeuchidza nezvesarudzo yemutungamiri weSouth Florida muna 2000 http://bit.ly/mJCER7
May 12, 2011 pa 12: 10 PM
yep, iyo dhizaini yekuvhotera ndeimwe yenguva yangu dzese dzandinodakarira kesi muhurombo UI 🙂
Jun 14, 2016 pa5: 48AM
Dhizaini dhizaini, yakanaka posvo, iyo configurator inoita kunge inozivikanwa uye yakasununguka